Laxoox - Wikipedia
Sidoo kale fiiri canjeero.
Boga "kimis" halkan ayaa laga soo toosiyay.
W:es:Laxoox Laxoox (Af-Carabi: لحوح, Af Yuhuudi: לחוח) (sidoo kale loo yaqaano Kimis) waa cunto ka mid ah canjeerada taasi oo laga cuno deegaanda Jabuuti, Soomaaliya, iyo Yemen. Sidoo kale, loxooxda waxaa laga cunaa wadanka Israaiil, halkaasi ooy geeyeen Yuhuuda ka qaxday wadanka Yaman. Loxooxdu waxay la mid tahay canjeerada cuntada Soomaalida, waxay kaga duwan tahay loxooxdu ma lahan khamiir badan sida canjeerada.
Laxoox, Kimis, Canjeero
Jabuuti, Soomaaliya, iyo Yemen
daqiiq cad, khamiir, biyo, yeast, milix
Sidoo kale fiiri: Cunto Soomaali • Cunto • Raashin (Qureec, Qado, Casho)
1 Diyaarinta Loxooxda
Laxooxda waxaa laga diyaariyaa daqiiq lagu qasay fixiso, khamiir, biyo diiran, yeast iyo milix taasi oo si fiican loo garaaco (tumo) si ay iskudhexgalaan iskudarkaasi, ka dib meel la dhigo mudo saacado ah si ay u khamiirto. Sida ugu badan daqiiqda laga diyaariyo laxooxda waxaa laga sameeyaa garowga.
Laxooxda waxaa lagu dubaa bir wareegsan oo loogu talogalay taasi oo loo yaqaano daawo. Wadanada qaar, gaar ahaan qurbaha waxaa la isticmaala maqle.
Sida caadiga ah, laxooxdu waxay ka mid tahay qureec iyo cashada meelo badan oo dadka Soomaalidu ku dhaqan yihiin. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar xataa ku qadeeyaan laxooxda. Sidoo kale, loxooxda waxaa lagu darsadaa subag, malab ama suugo iyo koob shaah ama bun ah. Laxooxda la cuno wakhtiga qadada waxaa lagu darsadaa suugo ama maraq.
↑ Little Business Women
↑ Hatikva market — the other side of Tel Aviv
↑ Dholas and other straw hats come into season
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Laxoox&oldid=192463"
Last edited on 7 Juun 2019, at 13:27